प्रायः जसो सोधिने प्रश्न - आवश्यक तेलहरूको लागि थोक विसारक अरोमाइजी
घर / सोधिने प्रश्न
१: तपाईं निर्माता वा ट्रेडिंग कम्पनी हुनुहुन्छ?
हामी निर्माता, OEM र ODM सेवा प्रदान गर्दैछौं।
२: तपाईको मुख्य बजार के हो?
अमेरिका र क्यानाडा सहित उत्तर अमेरिका; युरोप मुख्यतया जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, स्पेन र इटाली सहित; दक्षिण पूर्वी एशिया मुख्य भूमि चीन, जापान, कोरिया,
:: नमूनाको लागि डेलिभरी मिति के हो?
सामान्यतया १- 1-3 दिन सामान्य आवश्यकताको आईटमहरूको लागि यूपीएस, फेडएक्स वा डीएचएल द्वारा।
:: के तपाईका उत्पादनहरू हाम्रो मापदण्ड अनुरूप छन्?
हो, एरोमाइसीबाट सबै उत्पादनहरू आईएसओ 9000०००, सीई, ईटीएल, आरओएचएस, एसएएसओको प्रमाणपत्रसहित र बीएससीआई / युएल, आदि को कारखाना अडिट पास गरे।
:: तपाईं कसरी गुणवत्ता नियन्त्रण गर्नुहुन्छ?
हामी उत्पादन गुणवत्ता IQC, क्यूए, उत्पादन लाइनहरुमा, १००% वृद्धावस्थाको परीक्षण प्याकेजिंग अघि, र FQC द्वारा गोदाम समाप्त उत्पादनहरु को लागी उत्पादन नियन्त्रण गर्दछौं। हामी कडाईका साथ ISO 100 द्वारा सेट गरिएको सम्पूर्ण गुणवत्ता मापदण्डहरू पालना गर्दछौं।
:: MOQ के हो?
सामान्यतया हाम्रो MOQ 500PCS हो, तर नयाँ मोडेलहरूको लागि १०००PCS, र केही वस्तुहरूको लागि सानो परीक्षण अर्डरहरू स्वीकार्य छन्।
:: तपाईं कसरी सामानहरू ढुवानी गर्नुहुन्छ र यसले कति समय लिन्छ?
हामी सामान्य रूपमा DHL, UPS, FEDEX, TNT बाट जहाज गर्दछौं। यो सामान्यतया पुग्न -4-day दिन लाग्छ। हावामा, समुद्रबाट पनि स्वीकार्य छन्।
Your. तपाईको वारंटी के हो
१ बर्षे ग्यारेन्टी, एक बर्ष भन्दा अरु! लस एन्जलस मा हाम्रो शाखा व्यावसायिक बिक्री पछि सेवा प्रदान गर्दछ।
You। के तपाइँ OEM र ODM अर्डर स्वीकार गर्नुहुन्छ?
हो, हामी गर्छौं। MOQ अनुकूलित सेवाहरु का लागी १००० pcs हो (रंग, लोगो, प्याकेज, नयाँ मोडेल समावेश गर्दछ)।
१०. तपाईको नेतृत्व समय कस्तो छ?
नमूना7दिनको लागि। थोक आदेश 30० दिनको लागि।
यदि तपाईंले शिखर अवधिमा अर्डर राख्नुभयो भने, यसले अधिक समय लिन सक्दछ। तर हामी तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दो कोशिश गर्नेछौं।
११. के तपाइँ ब्लाइन्ड ड्रपशिपिंग प्रस्ताव गर्नुहुन्छ - वा चलानी वा प्याकेजि onमा सहित वा कुनै सम्बन्धित मार्केटिंग सामग्री बिना पठाउँदै हुनुहुन्छ?
१२. के तपाइँ बल्क ड्रपशिपिंग प्रस्ताव गर्नुहुन्छ - हाम्रो स्टोरको हालको बिक्री भोल्युम व्यक्तिगत रूपमा अर्डरहरू राख्न धेरै ठूलो छ?
१.. के तपाइँको कुनै उत्पादनहरु को लागी एक MOQ (न्यूनतम अर्डर मात्रा) आवश्यक छ?
न्यूनतम १ पीसी आईटमहरूको लागि हामीसँग सेफ्टी स्टक छ।
१.. के तपाईं Alipay मा एकै पटक सम्पूर्ण बल्क ड्रपशिपिंग अर्डरको लागि एक चलानी पठाउन सक्षम हुनुहुन्छ?
१.. के हामी आफ्नै प्याकेजि create सिर्जना गर्न सक्षम छौं?
हो। तर लागतमा थप्नेछ र प्रिन्ट गरिएको रंग बक्सलाई MOQ1000 चाहिन्छ।
१.. के तपाईं समान क्रममा आवश्यक तेलहरू समावेश गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, तर आवश्यक तेलको लागि ढुवानी लागत सायद केहि महँगो हुन सक्छ।
१.. हाम्रो कम्पनी तपाईंलाई प्रत्येक ग्राहकको जानकारी (पूरा नाम, ईमेल, ठेगाना, उत्पादन, आदि) को साथ एक एक्सेल स्प्रेडशिट (CSV) फाईल पठाउन चाहन्छ र तपाईं प्रत्येक ग्राहकलाई उनीहरूको उचित उत्पादन पठाएर व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक अर्डर प्रक्रिया गर्नुहुन्छ।
हो, हामी यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छौं।
१.. तपाईले त्यसपछि हाम्रो कम्पनीलाई सम्पूर्ण बल्क ड्रपशिपिंग अर्डरको लागि एक पूर्ण इनभ्वाइस पठाउँनुहुनेछ, जुन हामी खुशीसाथ Alipay वा Paypal मार्फत तिर्ने छौं।